June 2020 - ShwengweGames
ဝေဖန်မှုတွေကြားက အချစ်ရေးခိုင်မာလာတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေစတင်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် ဂီတဘက်ကိုကူးပြောင်းလာရင်းမက်လောက်စရာ၊မျက်လှည့်၊ အာဘွား၊ဂါ၊မယ်သီတာ၊ ပြတ်စာ နဲ့ နွားကျောင်းသူစတဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေများစွာကို ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတပိုင်းမှာအချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ လက်ခံပြီး သူမကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ ရိုက်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ကတော့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် အောင်လ နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့အချစ်ရေး အကြောင်းတွေ ပြောပြလာပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကို ပြောပြလာပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ အပြည့်ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အစ်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ ဂရုစိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ဖော်ပြပြီး မချစ်ပြဘူး၊ဂရုတစိုက်မပြဘူး။တကယ့် တကယ်ကျရင် သူလိုအပ်တာလည်း ကိုယ်သိသလို၊ကိုယ်လိုအပ်တာကိုလည်းသူသိတယ်။သူဆိုးတဲ့အရာတွေလည်း ရှိသလို အစ်မ ဆိုးတဲ့ အရာတွေလည်းရှိတယ်။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လွှတ်ပေးထားလိုက်တယ်။
မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အရာကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချော့တစ်လှည့်၊ခြောက်တစ်လှည့် တားတယ်။သူနားလည်ပေးတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိသလိုအစ်မကလည်းသူ့အပေါ် ကောင်းတာတွေရှိတယ်။တစ်ယောက်မကောင်းတာကိုတစ်ယောက်ထောက်ပြမှအဆင်ပြေမှာလေတစ်ယောက်တည်းပဲ ထောက်ပြလို့လည်း အဆင်မပြေဘူး” ဆိုတာကို မီဒီယာတစ်ခုရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လ နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးမှာ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီဝေဖန်မှုတွေကြားက အချစ်ရေးခိုင်မာလာတဲ့ အကြောင်း ဆက်လက် ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“ဝေဖန်မှု ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲ။ဘယ်နေရာ၊ဘယ်အချိန်မဆို ရှိမှာပဲ။အဲဒီဝေဖန်မှုတွေကို ကြောက်ရွံပြီးတော့ နောက်ဆုတ်သွားမယ့် မိန်းကလေးထဲမှာ အစ်မ မပါဘူးဆိုတာတော့ အစ်မပရိသတ်တွေ သိကြပါတယ်။သူကလည်းဒါတွေကို သိပ်စိတ်မဝင်စားတဲ့သူ၊အစ်မကလည်းဒါတွေကိုခေါင်းထဲမထည့်ဘူး။မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခံစားနေဖို့ထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေထိုင်သွားမယ်။အစ်မတို့နှစ်ယောက်လည်းဘယ်လောက်အထိကောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာ ဘေးက လူတွေသိတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
အောင်လနဲ့ဝိုင်းစုတို့ စုံတွဲလေးရဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြလားဆိုတာ ဖြေခဲ့ပါဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး ။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
ဝိုင္းစုခိုင္သိန္းကိုေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပရိသတ္ေတြ စတင္အားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဂီတဘက္ကို ကူးေျပာင္းလာရင္း မက္ေလာက္စရာ၊ မ်က္လွည့္၊ အာဘြား၊ ဂါ၊ မယ္သီတာ၊ ျပတ္စာ နဲ႔ ႏြားေက်ာင္းသူ စတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြမ်ားစြာကို ထြက္ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂီတပိုင္းမွာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္းကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြ လက္ခံၿပီး သူမကိုယ္တိုင္ႀကိဳက္တဲ့ ဇာတ္ကားဆိုရင္ေတာ့ ႐ိုက္ျဖစ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ကေတာ့ ခ်စ္သူျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ ေအာင္လ နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အခ်စ္ေရး အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပလာပါတယ္။ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္းကေတာ့ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္းကို ေျပာျပလာပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြ အျပည့္ရွိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
“ အစ္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္က ေဖာ္ျပၿပီး မခ်စ္ျပဘူး၊ ဂ႐ုတစိုက္မျပဘူး။ တကယ့္ တကယ္က်ရင္ သူလိုအပ္တာလည္း ကိုယ္သိသလို၊ ကိုယ္လိုအပ္တာကိုလည္း သူသိတယ္။ သူဆိုးတဲ့အရာေတြလည္း ရွိသလို အစ္မ ဆိုးတဲ့ အရာေတြလည္းရွိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ လႊတ္ေပးထားလိုက္တယ္။
မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အရာကို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေခ်ာ့တစ္လွည့္၊ ေျခာက္တစ္လွည့္ တားတယ္။ သူ နားလည္ေပးတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို အစ္မကလည္း သူ႔အေပၚ ေကာင္းတာေတြရွိတယ္။ တစ္ေယာက္ မေကာင္းတာကို တစ္ေယာက္ ေထာက္ျပမွ အဆင္ေျပမွာေလ။ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေထာက္ျပလို႔လည္း အဆင္မေျပဘူး” ဆိုတာကို မီဒီယာတစ္ခုရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျဖဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္လ နဲ႔ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးမွာ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ႀကဳံခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဝဖန္မႈေတြၾကားက အခ်စ္ေရးခိုင္မာလာတဲ့ အေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။
“ ေဝဖန္မႈ ဆိုတာကေတာ့ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာပဲ။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ရွိမွာပဲ။ အဲဒီေဝဖန္မႈေတြကို ေၾကာက္႐ြံၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုတ္သြားမယ့္ မိန္းကေလးထဲမွာ အစ္မ မပါဘူးဆိုတာေတာ့ အစ္မ ပရိသတ္ေတြ သိၾကပါတယ္။ သူကလည္း ဒါေတြကို သိပ္စိတ္မဝင္စားတဲ့သူ၊ အစ္မကလည္း ဒါေတြကို ေခါင္းထဲ မထည့္ဘူး။ မေကာင္းတဲ့အရာေတြကို ခံစားေနဖို႔ထက္ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္သြားမယ္။ အစ္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လည္း ဘယ္ေလာက္အထိ ေကာင္းေအာင္ေနတယ္ဆိုတာ ေဘးက လူေတြသိတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။
ေအာင္လနဲ႔ ဝိုင္းစုတို႔ စုံတြဲေလးရဲ႕ သီခ်င္းေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလားဆိုတာ ေျဖခဲ့ပါဦးေနာ္ ပရိတ္သတ္ႀကီး ။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ အတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္။
ငွေကြေးတစုံတရာကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် သီချင်းလေးမှာ ပါဝင်သီဆိုသွားမယ့် အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ
ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ မကြာသေးမီကလည်း မိစန္ဒီနဲ့အတူ Covid-19 ပညာပေးသီချင်းဖြစ်တဲ့ ” Go Away Corona” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တွဲဖက်သီဆိုခဲ့ကာ ပရိသတ်တေါရဲ့ တစ်ခဲနကအာပေးမှုကို သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးမှာ ပါဝင်သီဆိုသွားမယ့်အကြောင်းကို
“ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေလုပ်အားတွေကို ငွေကြေးတစုံတရာကြောင့် မဟုတ်ပဲနဲ့ မိမိရဲ့ ဆန္ဒအရ ပရဟိတစိတ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ် Coming soon” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရေးစပ်ထားတဲ့ “အသိမှတ်ပြုတယ်”ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတော့ ဝေကြီးနဲ့ မိစန္ဒီမှ ရေးသားထားပြီး ဖြိုးပြည့်စုံ၊ ဇာနည်အောင်၊ မိစန္ဒီ၊ ခင်စုစုနိုင်၊ ဂျူဝယ်လ် တို့က ပါဝင်သီဆိုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်
July 1, 2020 June 30, 2020 by Shwengwe Games
ဝါထပ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသတ် မှတ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊နက္ခတ်အ ကြောင်းတတ်သိကျွမ်းကျင်တဲ့ပ ညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ရှေးရှေးတုန်းကရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအတက်အကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်စရာရှိရင်ပြုပြဖို့ရာနက္ခက်ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ဆရာတွေကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးပြီးမြှောက်စားထားကြပါတယ်။
အဲဒီဆရာတွေကအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုတွက်ချက်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဝါထပ်တယ်လို့ရှင်ဘုရင်ကိုအသိပေးလိုက်ရင်ရှင်ျံ့ ဘုရင်ကလည်းဒီနှစ်ဝါထပ်တယ်လို့မိမိရဲ့အာဏာပနှံ့ရာနယ်ပယ်တွေကိုအသိပေးကြေငြာလိုက်တယ်၊အဲဒီလိုရှင်ဘုရင် ကြေငြာလိုက်တဲ့အခါတစ်တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးကအသိအမှတ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရဟန်းတော်တွေလည်းဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှာကိုယ်နေထိုင်တဲ့ကျောင်းမှာ ဝါဆိုဝါကပ်ကြရပါတယ်။
ပြီးတွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ဒီနေ့နေ ထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးနောက်နေ့နေထွက်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်လောကမှာတစ် ရက်လို့သတ်မှတ်နေကြတယ်။
အဲဒါဟာအများသိလွယ်အောင်မှတ်ထားတာပါ၊ မတိကျသေးပါဘူး၊တိတိကျကျသိချင်ရင်နက္ခတ်နဲ့သက်မှတ်ရပါတယ်။နေဆိုတာကတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်၊ဂြိုဟ်ကြီးကိုးလုံးထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့၊ဂြိုဟ်တွေဟာရွေ့လျားသွားလာနေကြတယ်။နက္ခတ်တွေလည်းရွေ့လျားသွားလာနေကြတယ်။ကောင်းကင်မှာဂြိုဟ်တွေရွေ့ လျားသွားလာပုံကပုံမှန်မရှိပါဘူး၊တစ်ခါတစ်ရံမြန်တယ်၊တစ်ခါတရံနှေးတယ်။
ပုံမှန်သွားနေကြတာပါပဲ၊အနှေးအမြန်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။နေနက္ခတ်ဟာထက်ကောင်းကင်မှာယှဉ်ပြိုင်သွားတဲ့အခါမှာ နက္ခတ်ကအသွားမြန်ပြီးနေကအသွားနှေးပါတယ်၊နက္ခတ်ကရက်ပေါင်း(၃၀)ပြည့်သွားရင်နေကိုကိုးပါတ်လွန်သွားတယ်လို့ ကျမ်းဂန်တွေမှာ ပြဆိုထားပါတယ်။
၁။အသဝနီနက္ခတ်၊ ၂။ဘရဏီနက္ခတ်၊၃။ကြတ္တိကာနက္ခတ်၊ ၄ရောဟဏီနက္ခတ်၊၅။မိဂသီနက္ခတ်၊ ၆။ဘဒြ္ဒနက္ခတ်၊၇။ပုန္နဖုသျှနက္ခတ်၊ ၈။ဖုသျှနက္ခတ်၊၉။အသလိဿနက္ခတ်၊ ၁၀။မဃနက္ခတ်၊၁၁။ပြုဗ္ဗဖလရုနီနက္ခတ်၊၁၂။ဥတ္တရဖလရုနီနက္ခတ်၊ ၁၃။ဟသတနက္ခတ်၊၁၄။စိတြနက္ခတ်၊ ၁၅။သွာတိနက္ခတ်၊၁၆။ဝိသာခါနက္ခတ်၊ ၁၇။အနုရာဓနက္ခတ်၊
၁၈။ဇေဋ္ဌနက္ခတ်၊၁၉။မူလနက္ခတ်၊ ၂၀။ပြုဗ္ဗာသာဠ်နက္ခတ်၊၂၁ ဥတ္တရာ သာဠ်နက္ခတ်၊ ၂၂။သရဝဏ်နက္ခတ်၊၂၃။ဓနသိဒ္ဓနက္ခတ်၊၂၄။သတ္တဘိသျှနက္ခတ် ၊၂၅။ပြဗ္ဗဘဒြပိုဒ်နက္ခတ်၊၂၆။ဥတ္တရ ဘ ဒြပိုဒ်နက္ခတ်၊၂၇။ရေဝတီနက္ခတ်ဆိုပြီး (၂၇)လုံးရှိပါတယ်။အဲဒီ(၂၇)လုံးကုန်ဆုံးတဲ့နေ့ဟာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တတိယ(၉)ပါတ်အစုကတော့ဇနီး မောင် နှံနှစ်ယောက်ယှဉ်တွဲနေတဲ့ပုံနဲ့တူလို့ မေထုန်ရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။စတုတ္ထ (၉)ပါတ်အစုကတော့ပုဇွန်လုံးပုံနဲ့တူတာကြောင့်ကရကဋ်ရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ပဉ္စမ(၉)ပါတ်အစုကတော့ခြင်္သေ့နဲ့တူလို့သိဟ်ရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဆဋ္ဌမ(၉)ပါတ်အစုကတော့အပျိုကညာရဲ့ဟန်အသွင်နဲ့တူတာကြောင့် ကန်ရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သတ္တမ (၉)ပါတ်အစုကတော့ချိန်ခွင်နဲ့တူတာကြောင့်တူရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
မကန်းသတ္တဝါနဲ့တူတာကြောင့်မကာရရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဧကာဒသမ (၉)ပါတ်အစုကတော့မကန်းအိုးနဲ့တူလို့ ကုံရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒွါဒသမ(၉)ပါတ်အစုကတော့ ငါးနဲ့တူလို့မိန်ရာသီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကိုးပါတ်တစ်စုကိုတစ်ရာသီ၊တစ်လလို့ခေါ်ဆို ပါတယ်။ ဒီ(၁၂)ရာသီ(၁၂)လပြည့်ရော တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတော့တာပါပဲ။တစ်နှစ် မှာရက်ပေါင်း(၃၆၅)ရက်လို့သိထားတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်လ၊တစ်ရာသီမှာရက်ပေါင်း(၃၀)နဲ့တွက်ကြည့်ရင်(၁၂)လ
အမှန်စင်စစ်နက္ခတ်(၂၇)လုံးကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေဟာ (၃၆၅)ရက်ပဲရှိတယ်။အခုနှစ်စဉ်တွက်နေတဲ့ပြက္ခဒိန်တွေမှာဆိုရင် အားလုံးရက်တွေကိုပေါင်းကြည့်လျှင်(၃၅၄)ရက်ပဲရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရက်တွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိအောင်(၃)နှစ်မှာတစ်ခါဝါထပ်ပေးရပါတယ်။
ဝါထပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဝါငယ်ထပ်၊ဝါကြီးထပ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဝါ ထပ်တာကတော့မြန်မာတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့(၁၂)လမှာဝါဆိုတစ်လထပ်ပြီးအပိုထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။အခြား ရက်တွေလတွေတော့ဘာမျှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဝါကြီးထပ်တဲ့နှစ်မှာတော့ဝါဆို တစ်လအပိုထည့်ပေးရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ ဒီဝါကြီးထပ်တဲ့နှစ်နယုန်လမှာလည်းအခါ တိုင်းနှစ်လိုရက်မစုံမဟုတ်ဘဲ၊ရက်စုံ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဘဝထဲမှာ စိတ်ညစ် စိတ်ပျက် နေစရာမလိုသင့်တဲ့ အချက် (၁၀)ချက်
သင့်ကိုခွဲသွားတဲ့သူက သင့်ကိုဆုံးရှုံးသွားတာသင်က သူ့ကိုဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး၊သူခွဲခွာသွားတာကနောက်တစ်လမ်းကအခုလျှောက်နေတဲ့လမ်းထက်ကောင်း လို့ရွေးခြယ်လိုက်တာ။
“ ခွဲခွာခြင်းကအသက်ရှင်စဉ်တစ် လျှောက်လုံးအများကြီးတွေ့ ရဦးမှာ ”
၂။ တစ်ဟုန်ထိုးစီးဆင်းနေတဲ့ အချိန်
အချိန်ကရေထက်တောင်မှစီးဆင်းတာမြန်သေးတယ်၊ဒါ့ကြောင့်လုပ်စရာရှိတာကိုမြန်မြန်လုပ်၊ကြိုးစားစရာရှိတာ မြန်မြန်ကြိုးစား၊ကိုယ့်ပခုံးထက်ကတာဝန် ကိုယ်ကျေအောင်လုပ်။
“ အသက်ရှင်နေပြီးလှုပ်နိုင်သေးချိန်မှာ အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါ ”
သင့်ကိုကျောခိုင်းထားတဲ့နံရံက သင့်ကိုဘယ်လိုမှအသက်ရှုလို့မရအောင်လုပ်မယ်၊သင့်မှာအရာရာဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ ထင်စေမယ်၊ဒါပေမယ့်သင်လေးလေး နက်နက်တွေးပြီးလက်ခံကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျောခိုင်းထားတဲ့နံရံကလည်းတစ်ဖက်ကမျက်နှာနံရံလိုပါပဲ၊တစ်ခါတစ်လေ ပခုံးကိုကော့ရင်ကိုမော့ပြီးသေချာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချို့အရာတွေက ကျနော်တို့ထင်ထားသလိုမရှုပ်ထွေးပါဘူး
“ ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့၊ နောက် ဆုတ်လို့နောက်ဆုံးလမ်းလုံးလုံးမရှိတဲ့အဖြစ်ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်”
အချို့သူကမွေးကတည်းက မင်းသားပဲ၊ အချို့ကျတော့မွေးကတည်းက မင်းမျိုး မင်းနွယ်၊ဒါပေမယ့်လူတော်တော်များများကမွေးကတည်းကသာမာန်မိသားစုမှာပဲပေါက်ဖွားလာတာများတယ်၊ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာသင်မပြောင်းလဲနိုင်တာမရှိဘူး… တကယ်လို့သင်ပြောင်းလဲချင်ရင်ပေါ့
“ ပန်းတိုင်ကိုဂရုမစိုက်နေဘဲ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်နေပါမှ လူ့ဘဝပါ ”
ဆိုး၊ကောင်း၊ယုတ်၊လတ်၊မြတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘယ်သူမဆို အထီးကျန်တဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းဖူးကြတာချည်းပဲ၊အရမ်းကို နက်နဲတဲ့အမှောင်ထုကြီးထဲမှာကိုယ်တစ်ကိုယ်ထီးရောက်နေတယ်ထင်ပြီးခေါင်းမမော့နိုင်တာသင်တစ် ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊
“ တကယ်တော့အထီးကျန်ဆန်တယ်ဆိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပေါ်ပဲမူတည်တာ၊ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့တောင့်တမှုအပေါ်မှာ သွားမူတည်နေတာ၊ကိုယ်ဖျောက်ထားရင် သူကပျောက်နေတယ် ”
အရမ်းကို ချိုမြတဲ့အဆိပ်၊ဖြတ်မရတဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိတယ်။ အဲဒါက အချစ်မဟုတ်ဘူးချစ်ခင်မှုတဲ့။
“လူ့တစ်သက်မှာသူများရဲ့ချစ်ခင်နှစ် သက်မှုကိုလည်းခံရဖူးမယ်၊သူတစ်ပါးကိုလည်းချစ်ခင်ဖူးမယ်၊ ဒါပေမယ့်အချစ်ကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်၊အချစ်တစ်ခုကြောင့်အခြားချစ်ခင်မှုတွေကို လျ စ်လျူရှုခဲ့ဖူးတယ်၊ဒါဆိုအဲဒီအချစ်ပျက် ပြားသွားခဲ့ရင်ကော အရင်က ကိုယ်လျစ်လျူရှုထားတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေက ပြန်ရနိုင်မှာလား”
၇။ ဆွဲမထားနိုင်တဲ့ မေ့ပျောက်မှု
ကျနော်တို့အားလုံးထင်ထားကြတာအ ချို့ ကိစ္စတွေကိုတစ်သက်မှာတကယ်မမေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပင်မမေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကို မေ့ပျောက်သွားကြတယ်။
“ လူ့ဘဝဟာအချို့အတိတ်တွေကြောင့်ပဲလှပနေကြရတာပါ၊အချို့မေ့သင့်တဲ့အ တိတ်ကို မေ့ပစ်ပါ၊ မမေ့သင့်တဲ့အတိတ်ကို မနက်ဖြန်အတွက် အားအင်အဖြစ်မွေးယူပါ ”
အခုူတစ်စက္ကန့်ကနောက်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ အတိတ်ဖြစ်သွားပြီ၊ဒါဆိုငါတို့မှာ ဆုံးရှူံး သွားတဲ့အတိတ်တွေ ဘယ်နည်းလိမ့်မလဲ
စကားတစ်ခွန်းကြားဖူးတယ်၊ “သင့်အတိတ်ကိုပဲသင်တစ်ချိန်လုံးတွေးနေပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိနေ့ရက်တွေက အတိတ်နေ့ရက်တွေကလောက်မကောင်းလို့တဲ့ ”
လူတွေဟာလက်ရှိအခြေအနေက အရင်ကထက်ကောင်းစားရင်အတိတ်ကို အ လိုလိုမေ့နေတတ်ကြတယ်။အတိတ်ကို ပြန်တွေးသင့်တာမှန်ပေမယ့်အတိတ်မှာပဲ အသက်မရှင်ပါနဲ့၊ ဒီနေ့မှာအသက်ရှင်ပါ ။
၉။ တပါးသူရဲ့ လှောင်ဖွဲ့မှု
သူများပါးစပ်ကသူများမျက်နှာမှာပေါက်တာ၊ကိုယ့်ရဲ့နားက ကိုယ့်ခေါင်းဘေးမှာပေါက်တာ၊ပြောတာမပြောတာသူ့အပိုင်း၊ နားထောင်၊မထောင်ကမှသာကိုယ့်ရဲ့အပိုင်း၊ းသူများရဲ့လှောင်ဖွဲ့မှုတွေကို ပြန်ပြုံးပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။
၁၀။ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ သေခြင်းတရား
မွေးဖွားခြင်းကတာထွက်၊ဘဝက ခရီးဆိုရင်၊သေခြင်းတရားကပန်းတိုင်ပဲ။ ဘယ် လိုမှရှောင်လွဲလို့မရဘူး။သေခြင်းတရားက ကွေးသောလက်မဆန့်မီနှင့်ဆန့်သောလက်မကွေးမီကြားထဲမှာရှိတာ၊ဝင်လေနှင့်ထွက်လေကြားထဲမှာတည်ရှိတာ၊ ဝင်လေရှိပြီးထွက်လေပြန်ထွက်မလာရင် အသက်က သေသွားပြီ။
“အချိန်မီ ကောင်းမှုဒါနပြုပါ ”
ဘဝမှာတစ်ခါတစ်လေကိုယ်ကကြိုးစားပေမယ့် ဖြစ်မလာတာတွေရှိတယ်သင်မှမဟုတ်ဘူး..သင်ကော၊သူကော.ကျနော်ကောဖြစ်ဖူးတယ်အဲဒီအချိန်ကျရင် စိတ်ကို လျော့သတဲ့လျော့ပြီးလွှတ်ချတတ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းသွားပြီဆို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအေးချမ်းသွားပြီ
ဘဝထဲမွာ စိတ္ညစ္စိတ္ပ်က္ေနစရာမလိုသင့္တဲ့ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္
သင့္ကိုခြဲသြားတဲ့သူက သင့္ကိုဆုံးရႈံးသြားတာသင္က သူ႕ကိုဆုံးရႈံးသြားတာမဟုတ္ဘူး၊သူခြဲခြာသြားတာကေနာက္တစ္လမ္းကအခုေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းထက္ေကာင္း လို႔ ေ႐ြးျခယ္လိုက္တာ။
“ ခြဲခြာျခင္းကအသက္ရွင္စဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လုံးအမ်ားႀကီးေတြ႕ ရဦးမွာ ”
၂။ တစ္ဟုန္ထိုးစီးဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္
အခ်ိန္ကေရထက္ေတာင္မွစီးဆင္းတာျမန္ေသးတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္လုပ္စရာရွိတာကိုျမန္ျမန္လုပ္၊ႀကိဳးစားစရာရွိတာ ျမန္ျမန္ႀကိဳးစား၊ကိုယ့္ပခုံးထက္ကတာဝန္ ကိုယ္ေက်ေအာင္လုပ္။
“ အသက္ရွင္ေနၿပီးလႈပ္နိုင္ေသးခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားပါ ”
သင့္ကိုေက်ာခိုင္းထားတဲ့နံရံက သင့္ကိုဘယ္လိုမွအသက္ရႈလို႔မရေအာင္လုပ္မယ္၊သင့္မွာအရာရာဆုံးရႈံးသြားၿပီလို႔ ထင္ေစမယ္၊ဒါေပမယ့္သင္ေလးေလး နက္နက္ေတြးၿပီးလက္ခံၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာခိုင္းထားတဲ့နံရံကလည္းတစ္ဖက္ကမ်က္ႏွာနံရံလိုပါပဲ၊တစ္ခါတစ္ေလ ပခုံးကိုေကာ့ရင္ကိုေမာ့ၿပီးေသခ်ာၾကည့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္အခ်ိဳ႕အရာေတြက က်ေနာ္တို႔ထင္ထားသလိုမရႈပ္ေထြးပါဘူး
“ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မဆုတ္ပါနဲ႕၊ ေနာက္ ဆုတ္လို႔ေနာက္ဆုံးလမ္းလုံးလုံးမရွိတဲ့အျဖစ္ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္”
အခ်ိဳ႕သူကေမြးကတည္းက မင္းသားပဲ၊ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ေမြးကတည္းက မင္းမ်ိဳး မင္းႏြယ္၊ဒါေပမယ့္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေမြးကတည္းကသာမာန္မိသားစုမွာပဲေပါက္ဖြားလာတာမ်ားတယ္၊ဒီကမာၻေပၚမွာသင္မေျပာင္းလဲနိုင္တာမရွိဘူး… တကယ္လို႔သင္ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေပါ့
“ ပန္းတိုင္ကိုဂ႐ုမစိုက္ေနဘဲ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံးေပ်ာ္႐ႊင္ေနပါမွ လူ႕ဘဝပါ ”
ဆိုး၊ေကာင္း၊ယုတ္၊လတ္၊ျမတ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးဘယ္သူမဆို အထီးက်န္တဲ့အရသာကို ျမည္းစမ္းဖူးၾကတာခ်ည္းပဲ၊အရမ္းကို နက္နဲတဲ့အေမွာင္ထုႀကီးထဲမွာကိုယ္တစ္ကိုယ္ထီးေရာက္ေနတယ္ထင္ၿပီးေခါင္းမေမာ့နိုင္တာသင္တစ္ ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး၊
“ တကယ္ေတာ့အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆိုတာကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေပၚပဲမူတည္တာ၊ ကိုယ့္စိတ္ရဲ႕ေတာင့္တမႈအေပၚမွာ သြားမူတည္ေနတာ၊ကိုယ္ေဖ်ာက္ထားရင္ သူကေပ်ာက္ေနတယ္ ”
အရမ္းကို ခ်ိဳျမတဲ့အဆိပ္၊ျဖတ္မရတဲ့ေဆးတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒါက အခ်စ္မဟုတ္ဘူးခ်စ္ခင္မႈတဲ့။
“လူ႕တစ္သက္မွာသူမ်ားရဲ႕ခ်စ္ခင္ႏွစ္ သက္မႈကိုလည္းခံရဖူးမယ္၊သူတစ္ပါးကိုလည္းခ်စ္ခင္ဖူးမယ္၊ ဒါေပမယ့္အခ်စ္ကေတာ့တစ္ခုပဲရွိတယ္၊အခ်စ္တစ္ခုေၾကာင့္အျခားခ်စ္ခင္မႈေတြကို လ် စ္လ်ဴရႈခဲ့ဖူးတယ္၊ဒါဆိုအဲဒီအခ်စ္ပ်က္ ျပားသြားခဲ့ရင္ေကာ အရင္က ကိုယ္လ်စ္လ်ဴရႈထားတဲ့ခ်စ္ခင္မႈေတြက ျပန္ရနိုင္မွာလား”
၇။ ဆြဲမထားနိုင္တဲ့ ေမ့ေပ်ာက္မႈ
က်ေနာ္တို႔အားလုံးထင္ထားၾကတာအ ခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကိုတစ္သက္မွာတကယ္မေမ့နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ဒါေပမယ့္အဲဒီလိုေတြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပင္မေမ့နိုင္တဲ့ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။
“ လူ႕ဘဝဟာအခ်ိဳ႕အတိတ္ေတြေၾကာင့္ပဲလွပေနၾကရတာပါ၊အခ်ိဳ႕ေမ့သင့္တဲ့အ တိတ္ကို ေမ့ပစ္ပါ၊ မေမ့သင့္တဲ့အတိတ္ကို မနက္ျဖန္အတြက္ အားအင္အျဖစ္ေမြးယူပါ ”
အခုူတစ္စကၠန႔္ကေနာက္တစ္စကၠန႔္ရဲ႕ အတိတ္ျဖစ္သြားၿပီ၊ဒါဆိုငါတို႔မွာ ဆုံးရႉံး သြားတဲ့အတိတ္ေတြ ဘယ္နည္းလိမ့္မလဲ
စကားတစ္ခြန္းၾကားဖူးတယ္၊ “သင့္အတိတ္ကိုပဲသင္တစ္ခ်ိန္လုံးေတြးေနၿပီဆိုရင္အခုလက္ရွိေန႕ရက္ေတြက အတိတ္ေန႕ရက္ေတြကေလာက္မေကာင္းလို႔တဲ့ ”
လူေတြဟာလက္ရွိအေျခအေနက အရင္ကထက္ေကာင္းစားရင္အတိတ္ကို အ လိုလိုေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။အတိတ္ကို ျပန္ေတြးသင့္တာမွန္ေပမယ့္အတိတ္မွာပဲ အသက္မရွင္ပါနဲ႕၊ ဒီေန႕မွာအသက္ရွင္ပါ ။
၉။ တပါးသူရဲ႕ ေလွာင္ဖြဲ႕မႈ
သူမ်ားပါးစပ္ကသူမ်ားမ်က္ႏွာမွာေပါက္တာ၊ကိုယ့္ရဲ႕နားက ကိုယ့္ေခါင္းေဘးမွာေပါက္တာ၊ေျပာတာမေျပာတာသူ႕အပိုင္း၊ နားေထာင္၊မေထာင္ကမွသာကိုယ့္ရဲ႕အပိုင္း၊ းသူမ်ားရဲ႕ေလွာင္ဖြဲ႕မႈေတြကို ျပန္ၿပဳံးျပနိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။
၁၀။ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ ေသျခင္းတရား
ေမြးဖြားျခင္းကတာထြက္၊ဘဝက ခရီးဆိုရင္၊ေသျခင္းတရားကပန္းတိုင္ပဲ။ ဘယ္ လိုမွေရွာင္လြဲလို႔မရဘူး။ေသျခင္းတရားက ေကြးေသာလက္မဆန႔္မီႏွင့္ဆန႔္ေသာလက္မေကြးမီၾကားထဲမွာရွိတာ၊ဝင္ေလႏွင့္ထြက္ေလၾကားထဲမွာတည္ရွိတာ၊ ဝင္ေလရွိၿပီးထြက္ေလျပန္ထြက္မလာရင္ အသက္က ေသသြားၿပီ။
“အခ်ိန္မီ ေကာင္းမႈဒါနျပဳပါ ”
ဘဝမွာတစ္ခါတစ္ေလကိုယ္ကႀကိဳးစားေပမယ့္ ျဖစ္မလာတာေတြရွိတယ္သင္မွမဟုတ္ဘူး..သင္ေကာ၊သူေကာ.က်ေနာ္ေကာျဖစ္ဖူးတယ္အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ စိတ္ကို ေလ်ာ့သတဲ့ေလ်ာ့ၿပီးလႊတ္ခ်တတ္ရမယ္ကိုယ္စိတ္ေအးခ်မ္းသြားၿပီဆို ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္လည္းေအးခ်မ္းသြားၿပီဘာမွ ေဆြးစရာမရွိဘူး.။
အမျိုးသား ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ အမျိုးသမီး Sexy မော်ဒယ်တွေ များ
လူမှုကွန်ရက် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုသူများလာတာနဲ့ အမျှ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နာမည်ကြီးလာကြသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ Food Blogger၊ Travel Bolgger ၊ Beauty Blogger တွေအပြင် Social Influencer စတဲ့ အရာတွေနဲ့ နာမည်ကြီး လူသိများသူတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်။
အရင်က Facebook ပေါ်မှာ “မောင်မောင်စေတန်” ဆိုတဲ့ Page တခုရှိခဲ့ပြီး ဒီ Page ကနေ ရေပန်းစားနေတဲ့ မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်တချို့ရဲ့ခပ်ဟော့ဟော့ ပုံတွေကို တင်လေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ ဒီ Page က ပုံတွေက ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုဆိုရင်တော့ လူမှုကွန်ရက် ဆိုရှယ်မီဒီယာ တခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာ Follower များပြီး Sexy ဆန်ဆန် ပုံများကို တင်ကာအမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ဝန်းရံမှုကို ရရှိလာခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်၊ သရုပ်ဆောင်တွေ အများအပြား ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီထဲကမှ Follower များပြီး၊အထူးသဖြင့်အမျိုးသား ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ အမျိုးသမီး Sexy မော်ဒယ်တွေ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အရင်က နာမည်ကြီးထိပ်တန်းမင်းသမီးတဦး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်နဲ့ မတူ ခန္ဓာကိုယ်အသားပေး ဖော်ပြမှုများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို တဖန်ပြန်လည် ရယူထားနိုင်သူပါ။အရင်က ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာဆို သင်ဇာဝင့်ကျော် ပွဲတက်မှဒီပွဲက လူစိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးကို ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သူပါ။သူမရဲ့ပွဲတက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှ ဖော်ပြထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကြောင့်ပါ။
သင်ဇာဝင့်ကျော်က ဒီလိုဖက်ရှင်တခုတည်းကြောင့်လည်းသူမကို ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအချိုးအစားကျအောင် Gym ကစားရင်း အပင်ပန်းခံရင်းနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူခဲ့သူပါ။
Facebook ပေါ်မှာ Follower သိန်း ၂၀ နီးပါး ရှိပြီး သူမ တင်တဲ့ ပို့စ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလိုလို ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေ များပါတယ်။ဝေဖန်မှုအခံရဆုံး အနုပညာရှင်ထဲမှာပါဝင်ပေမယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုအခံရဆုံး အဖြစ်လည်း တည်ရှိနေပါတယ်။
ကချင်တိုင်းရင်းသူ မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ သူမရဲ့ Page မှာ Follower ၉ သိန်းကျော် ရှိတဲ့ Sexy မော်ဒယ်တဦးဖြစ်ပြီး သူမကတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ နာမည်ကြီးလာသူပါ။သူမရဲ့အချိုးကျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းနဲ့အတူ Sexy Pose တွေကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသားထုကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့သူပါ။
Single Mother လို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားဖော်ပြတတ်လို့သူမကိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကြော်ငြာတွေပါ ရိုက်ကူးလာခဲ့ရပြီး Pose တခုကို Like အနည်းဆုံး တသိန်းကျော်ကနေ ရှိနေတတ်သူပါ။
လုလုအောင်၊သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ရွှေအိမ်စည်တို့ ၃ ဦးအတူ ပါဝင်ထားတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာ ကြော်ငြာတခုကတော့ပရိသတ်တွေအတော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ ကြော်ငြာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ ၃ ဦးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပြသခဲ့ရတဲ့ ကြော်ငြာလည်း ဖြစ်နေလို့ပါ။ဝေဖန်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလှ Sexy ပုံများကို မကြာခဏ Facebook ပေါ်တင်တာကြောင့် ဆေးကုသခွင့် ဆမ လက်မှတ်ကိုအသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ပရိသတ်များကြားစိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နန်း‌ေမွစံကတော့ လက်ရှိမှာ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူများကြား ရေပန်းအစားဆုံး Sexy Model တဦး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ သူ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတခုကို Porn Hub ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ခဲ့လို့ စိတ်ဝင်စားမှု အခံရဆုံးနဲ့ ဝေဖန်မှုအခံရဆုံး ဖြစ်နေတာပါ။နန်းမွေစံရဲ့ Facebook Page က Follower ၉ သိန်းကျော်ပဲ ရှိပေမယ့်အခုဆိုရင် သူတင်တဲ့ပို့စ်တွေကိုတော့ပရိသတ်တွေက စောင့်ကြည့်ရလောက်အောင် ဖြစ်လာခဲ့သူပါ။
“အိန်ဂျယ်ရစ်ရစ်” လို့ Facebook ပေါ်မှာ လူများတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကလည်း သူ့ရဲ့ခရီးသွားရင်း အလှရိုက်ထားတဲ့ Sexy ဆန်ဆန်ပုံများကြောင့် လူသိများပါတယ်။သူကတော့ Follower ၅ သိန်းကျော် ရှိပေမယ့်သူတင်တဲ့ Pose တခုချင်းစီက ပရိသတ် Like ၂သိန်းကျော်က စပြီး ရရှိထားသူပါ။
အလွမ်းစာသားတွေနဲ့ ခရီးသွားပုံတွေတင်တတ်သလို မကြာခဏ ရေကူးကန်ထဲကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပုံတွေတင်တတ်လို့ အမျိုးသားထုကြားမှာ “ရစ်” ဆိုပြီး ရေပန်းစားသူတဦးပါ။
နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသာ ပုံတွေတင်လေ့ရှိပြီးအနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လှုပ်ရှားမှုမရှိသူ တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ မဂ္ဂဇင်းကာဗာ၊အလှပုံတွေမှာ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပြီးအခုချိန်မှာတော့ လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေသူ တဦးပါ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ Mask တွေကို ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ Two Pieces ပုံစံတပ်ဆင်ပြီးရိုက်ခဲ့လို့လူမှုကွန်ရက်မှာ ဝေဖန်ခံခဲ့ရသူကတော့ သဇင်ဦးပါ။သူမကတော့ ပညာပေးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ဒီလိုရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် Mask တွေနဲ့ မရိုက်သင့်ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခံခဲ့ရသူပါ။
သဇင်ဦးကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ကြီးကြီးမားမား မရှိသေးဘဲ Facebook ပေါ်မှာသာ ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းအလှတွေကို မကြာခဏ တင်လေ့ရှိသူဖြစ်လို့အမျိုးသား ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း ခံနေရသူပါ။ကိုယ်တိုင်လည်း Sexy Model လို့ ခံယူထားပြီးတင်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ် အသားပေးပုံတွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမတင်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းကလည်း Facebook Like အနည်းဆုံး ၂ သောင်းကျော်ကနေ စတင် ရရှိထားသူဖြစ်လို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ Sexy Model အဖြစ် လူသိများတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်နေသူပါ။
( အင်္ဂါ ) သားသမီးများသီဟရာဇာခြင်္သေ့မင်းနေ့မွေးဖွားသူများ
အင်္ဂါသားသမီးများသည်စိတ်သဘောထားကောင်မွန်၍ ထက်မြက်ကြသည်။ကူညီပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိကြသည်။စိတ်ဓါတ်မာကျော၍ ဇွဲလုံးလဝရိယရှိသူများဖြစ်ကြမည်။မိမိယုံကြည်မိပြီဆိုလျင် မည်သို့သောအခက်အခဲမည်သို့သောအတားအစီးရှိသည် ဖြစ်စေ စိတ်မြန်လက်မြန်နုင့် အောင်မြင်သည်အထိ ကျိုးစားလုပ်ကိုင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ကြသည်
အင်္ဂါသားသမီးများသည်ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသော စိတ်အခြေခံရှိသူများသာဖြစ်မည်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းသူများဖြစ်ကြမည်။သူတိုသည် ပြောစရာရှိလျင် ပွင့်စွာပြောဆိုတတ်ကြသာများအများအကျိုးသယ်ပို လိုစိတ်ရှိကြသူများသာဖြစ်ပါသည်
အင်္ဂါသားသမီးများသည်မည်သိုသော နယ်ပယ် မည်သို့သော အလုပ်ဖြစ်စေကျရာနေရာ ကြုံရာ ဘဝတွင် ထွန်းပေါက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါသည်
လူအများ စိတ်မဝင်စားသော အလုပ်များလူအများ မလုပ်နိုင်သော အလုပ်များတွင် ထူးခြားစွာအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြ သူများသာဖြစ်ပါမည်။သူတို့သည် စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်ရှိသူများအရာရာသင်ကြားတတ်မြောက်လိုစိတ်ရှိသူများသာဖြစ်ပါမည်။
အင်္ဂါသားသမီးများသည်မွေးရာပါ စိတ်ဝိညာဉ်၏ ရဲစွမ်းသတ္တိ ဇွဲလုံးလ ဝရိယရှိသူများလက်ရုံးရည် နှလုံးရည် ထက်မြက်သူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်ဘဝတွင် အလုပ်နင့် ဘဝ ရည်မှန်းချက်များသည် မကြာခဏအပြောင်းအလဲများနုင့်တွေ့ကြုံရတတ်သူများသာ ဖြစ်ပါမည်။
အင်္ဂါသားသမီးများသည်စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရသော အလုပ်များ ဆန်းသစ်တီထွင်ရသောအလုပ်များနင့် ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင် ရသော အလုပ်များတွင် ထူးခြားသော ပါရမီထူးများ ပါရှိနေကြသူများဖြစ်ပါမည်
အင်္ဂါသားသမီးများသည်ရဲရင့်သော တိုက်ခိုက်ရေးအလုပ်များစွန့်စားရသော အလုပ်တာဝန်များပင်ပန်းစွာ လုံးလဝရိယအားစိုက်ရသောအလုပ်များတွင်ထူးခြားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သူများသာ ဖြစ်ပါမည်။သူတို့သည် ရှင်သန်ရာ မိသားစု ပါတ်ဝန်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ အပေါ်တွင်အကျိုးပြုကောင်းကျိုးဆောင်ရန် စိတ်သန်သူများသာဖြစ်ကြပါမည်
သူတို့သည် ယုံကြည်ရာသို့ အစွဲသန်သောသဘောရှိသူများခေါင်းမာတတ်ကြသူများ ဖြစ်ါကြပါမည်။စိတ်ခံစားမှု့ အင်အားကြီးမားသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်။သူတို့၏ စိတ်ခံစားမှု့ကို လှို့ဝှက်စွာ မြို့သိတ်ထားတတ်သူများဖြစ်ကြမည်
အင်္ဂါသားသမီးများသည်တသက်တာဘဝ အငြိမ်မနေ လှုပ်ရှားကျိုးစားနေသူများသာဖြစ်ကြပါမည်။မတူညီသော အလုပ်များနင့် ဝေးလံသော အရပ်များသို့ဆက်သွယ်ခြင်း သွားလာရခြင်းများကို စိတ်ပါဝင်စားသူသူတို့ကိုအပြင်ပန်းက ကြည့်ပါက ပေါ့ပေါ့နေသူများဟုထင်မြင်စရာရှိသော်လည်းသူ့တို့အတွင်းစိတ်ထဲ၌ လေးနက်သော လောကအမြင်များရှိနေကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည်
အင်္ဂါသားသမီးများသည်သူ့တို့နင့် ဆက်နွယ်သော မိသားစုနင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအပေါ် ကောင်းကျိုးဆောင်သောအနစ်နာခံ၍ အကျ ိးပြုတတ်သော စိတ်ရှိသူများကာကွယ်စောင့်လျောက်တတ်သူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်
* ( အင်္ဂါ သားသမီးများ )မွေးဖွားသည်မှအသက် ၈ နစ်အတွင်း
မိသားစုနင့် အဆွေအမျ ိုးများသို့ကောင်းကျ ိုးသက်ရောက်စေပါမည်။မိသားစုနင့် ဆက်နွယ်သော အလုပ်များတွင် စက်နှင့်စက်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ အကျိုပေးမည်။စျေးဆိုင်များ ဆရာနင့်ပါတ်သက်သော ကောင်းကျိုးများအဆွေ အမျိုးတို၏ အောင်မြင်တိုးတက်မှု့နင့် သူတို့၏ကူညီစောင့်လျောက်မှု့များ ရရှိပါမည်
အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ‘ ၈ နစ်အတွင်းအညံ့များပပျောက်စေရန်နှင့်ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏အရှေ့တောင်အရပ်အင်္ဂါဂြိုလ်တိုင်တွင် သန့်ရှင်းရေး အမှု့ကုသိုလ်ပြုပါ။အင်္ဂါ ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး ၍ဆံ ၃ပုံ ဆား ၃ ပုံ လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါအင်္ဂါနေ့တွင်လှူ ပါ
*အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ၉ နစ်မှ ၂၅ နစ်အတွင်း
ပညာသင်ကြားခြင်းနင့် ပညာနင့်ပါတ်သက်သော အလုပ်များမိဘများအတွက် မြေနင့်ပါတ်သက်သော ကောင်းကျိုးများရရှိခံစားရစေတတ်ပါမည်ဝေးလံသော အရပ်များ သွားရာ ဆက်သွယ်ရခြင်းနှင့်ဝေးလံသော အရပ်များမှ ငွေကျေး ဥစ္စာဓနများ ရရှိတတ်ပါသည်။
အသိပညာ အတတ်ပညာ နင့် သင်ကြား လုပ်ကိုင်ရခြင်းများထူးခြား အကျိုးပေးမည့် နစ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။မိမိထက် အသက်အရွယ်ကြီးသူ များက ချစ်ခင်နစ်သက်မေတ္တာဝင်ခြင်း ခံရ တတ်ပါသည်
အင်္ဂါ သားသမီးများ အသက် ၉ နစ်မှ ၂၅ အတွင်း
တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ တောင်အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနံဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေး အမှု့ကုသိုလ်ပြုပါ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်မင်းကိုရည်စူး၍ ရွှက်လှ ‘ ၄ ညွန့်နင့် ရေ ‘ ၄ ခွက်လှူ ပါ။အင်္ဂါနေ့နင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လှူ ရပါမည်
အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ၂၆ မှ အသက် ၃၅ အတွင်း
မမျော်လင့်သော ဘဝ ဖြစ်စဉ်များနှင့်နေရပ်ဒေသ အပြောင်းအလဲများကြုံရတတ်ပါသည်။မတည်ငြိမ်သောအလုပ် ဘဝ နှင့် အပြောင်းအ ရွေ့များအိမ်ရာ ပြုပြင်တည်ဆောက်ရခြင်းများကြုံမည်။မကြာခဏသော ဘဝလမ်း အချိုးအကွေ့များနှင့်( အင်္ဂါ နေ့ဖွား အမျိုသမီးများအတွက် )
ချစ်မေတ္တာ အိမ်ထောင်ရေးနင့် ဆက်နွယ်သော သောကပြသာနာများ အထူ ဂရုပြုရမည့် နစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်
မိသားစု အဆွေအမျိုးများနင့် အဆင်ပြေအောင်နေရမည်။မဆိုင်သူများ၏ ကိစ္စများတွင်ဝင်ရောက် မပါသင့်အရာရာ စိတ်ရှည်သည်းခံ ရပါမည်ငွေကြေး ရင်းနှီးမြုတ်နံမှု့များ မပြုသင့်သော နှစ်များပါ
အင်္ဂါ သားသမီးများ အသက် ‘ ၂၆ မှ ၃၅ အတွင်း
တန်ခိုးကြီး ဘုရား၏ အနောက်တောင် စနေနံဂြိုလ်တိုင်တွင်သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်မှု့ပြုပါ။စနေဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ မီးအလင်း ‘ တိုင်လှူ ပါစနေနေ့နုင့် အင်္ဂါနေ့တွင် လှူ ပါ
*အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ၃၆ နှစ်မှ အသက် ၅၄ အတွင်း
မမျော်လင့်သောငွေများစွာရရှိတတ်သော နစ်များပါအမွေ ရရှိတတ်သည် မြေဝင်တတ်သည်။ကောင်းမွန်သော အိမ်ယာတည်ဆောက်ရခြင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြုတ်နှံရသော အလုပ်များတွင်ထူးခြားစွာအောင်မြင်ကံကောင်း အကျိုးပေးပါမည်
စျေးဆိုင်တည်ခြင်း ဥယာဉ်ခြံမြေ အလုပ်များပညာနင့် ဆက်နွယ်ပါတ်သက်သော အလုပ်များတွင်ထူခြားသော ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိစေပါမည်။မိမိနေထိုင်ရာပါတ်ဝန်းကျင်တွင် လူအများ၏ ယုံကြည်လေးစားမှု့ရရှိပါမည် ။အလှူအတန်းပေးရတတ်ပါသည် ဓန ဥစ္စာနင့် ဘုန်းတန်ခိုးအောင်မြင်ကံကောင်းစေသော နစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်
ဘုန်တန်ခိုး ထူးခြားတောက်ပသော နစ်များ ဖြစ်ပါသည်။မိမိကျင်လည်ရာ လုပ်ငန်း ခွင်နုင့် နေထိုင်ရာ အရပ်တွင်အကြီး အမှူး အုပ်ချုပ်သူဖြစ် တတ်ပါသည်
အင်္ဂါသား သမီး အသက် ‘၃၆ မှ ၅၄ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန် နုင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီး ဘုရား၏ အနောက်အရပ် ကြာသာပတေးဂြိုလ်တိုင်တွင်သန့်ရှင်းရေး အမှု့ပြုပါ။ကြာသာပတေး ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ကြွေပုကန်ုပြားပေါ်တွင် ပန်းဖြူ ‘ ၅ ပွင့်တင်၍ လှူ့ပါ။လိုရာဆုတောင်း ပါ။အင်္ဂါနေ့နုင့် ကြာသာပတေးနေ့တွင်လှူ ပါ
* အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ၅၅ မှ အသက် ၆၆ အတွင်း
မိုးတိမ်ဆန်သော နစ်ကာလများသာ ဖြစ်ပါမည်
ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများ သို့ဆက်သွယ်သွားလာရခြင်းအလုပ်အကြံ အသစ်များအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရခြင်းများမရောက်ဘူးသော အရပ်များ မလုပ်ဘူးသော အလုပ်များကြံဆောင်လုပ်ကိုင်ရသော နှစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်
ထူးခြားသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ၏ မစကူညီမှု့များ ရရှိလာပါမည်။မိမိ၏ အိမ် ခြံမြေနင့် ခိုင်မာသော ပစ္စည်းဥစ္စာများ ကိုထုခွဲရောင်းချခြင်း ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်အထူးသတိထားပြုလုပ်ရမည့် နှစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်ကျမ္မာရေးတွက်ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း နှင့် သွေး လေ နှင့်တက်နွယ်သောဝေဒနာ စုများသတိထား ရပါမည်
အင်္ဂါ သားသမီးများ အသက် ‘ ၅၅ မှ ၆၆ အတွင်း
တန်ခိုးကြီး ဘုရား၏ အနောက်မြောက် ရာဟု ဂြိုလ်တိုင်တွင်သန့်ရှင်းရေး ကုသိုလ်အမှု့ပြုပါ။ရာဟုဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍လေယပ် ( ယာပ်တောင် ) လှူ ပါ။အင်္ဂါနေ့နင့် ဗုဒ္ဓဟူး ညနေပိုင်း လှူ ရပါမည်
* အင်္ဂါသားသမီးများ အသက် ၆၇ မှ အသက် ၈၇ ကာလများ
ကောင်းမွန်သောမြေဝင်ပါမည်။သစ်လွင်သောအိုးအိမ်တိုက်တာများ တည်ဆောက်ရမည်။ချစ်သူခင်သူ ပေါများပါမည်။ရှာဖွေရလွယ်ကူသော ငွေကျေးဥစ္စာဓန များစွာရရှိပါမည်။အလှူအတန်များပေးလှူရပါမည်။ဘုန်းတန်ခိုးတောက်ပပါမည် အရာရာ ထူးခြားကံကောင်းသောနစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်
ကျမ္မာပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းသော နှစ်များဖြစ်ပါမည်ကျမ္မာရေး သွေးလေ ဝေဒနာစုနှင့်အဖု အကျိတ်များ သတိထားရပါမည်အမဲသားရှောင်သင့်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်
အင်္ဂါသား သမီးများ အသက် ‘ ၆၇ မှ ‘ ၈၇ အညံ့များပြေပျောက်စေရန်နုင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ မြောက်စူးစူးသောကြ်ာနံဒေါင့်တွင် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုပါ။သောကြ်ာဂြိုလ်မင်း ကိုရည်စူး၍သစ်သီး ‘ ၆ လုံး လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါ။အင်္ဂါသောကြ်ာ နေ့များတွင်လှူ ရပါမည်
* အင်္ဂါသားသမီးများအသက် ၈၈ နစ်မှ အသက် ၉၃ နစ်
သားသမီး နင့် သားသမီးနင့် တူသောသူများ၏ချစ်ခင်ကျင်နာ စောင့်လျောက်မှု့များ ရရှိပါမည်။ထိုသူတို့ကြောင့်ပင် သောကများရတတ်သောနှစ်များပင် ဖြစ်ပါသည်ကျမ္မာရေး ဦးခေါင်း ဦးနှောက်အာရုံကြောတိုင်ရာနှင့်အရိုးအကြာဝေဒနာများ သတိထားရပါမည်။ထူးခြားသော တရားဓမ္မအလင်း ရရှိမည့် နစ်များဖြစ်သည်
အင်္ဂါသားသမီးများ အသက် ‘ ၈၈ မှ ‘ ၉၃ အတွင်း
အညံ့များပြေပျောက်စေရန်နင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အရှေ့မြောက်အရပ်တနင်္ဂနွေ ဂြိုလ်နံအရပ်တွင် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုပါတနင်္ဂနွေ ဂြိုလိမင်းကို ရည်စူး၍အုန်းညွှန့် ‘ ၆ ညွှန့်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါအင်္ဂါနေ့နင့် တနင်္ဂနွေ နေ့တွင်လှူ ရပါမည်
* ( အင်္ဂါသားသမီးများ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ )
* အင်္ဂါ သင်္ကေတရုပ်ပုံ ( ခြင်္သေ့ရုပ် )
* အင်္ဂါဂြိုလ်အရပ် ( အရှေ့တောင် အရပ် )
* အင်္ဂါ ဂြိုလ်သက် ( ၈ နစ် )
* အင်္ဂါ နံသင့် အက္ခရာ ( စ ဆ ဇ စျ ည )
* အင်္ဂါ ကိုယ်စားပြု သင်္ချာ (3– ဂဏန် )
* အင်္ဂါ ဂြိုလ်ဓါတ်သဘာဝ (ဝါယော- လေဓါတ် )
* အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် အကျိုးပေးအရာင်များ( အနီရောင်- အနက်ရောင် – အဝါရောင်များ )
* အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အဆောင်ရတနာ(သန္တာ ကျောက်မျက် )
* အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အတူလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အကျိုးပေးနေ့သားများမှာ( တနင်္လာ – ကြာသာပတေး – သောကြာ )
* အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် အရေးကြီးသော အလုပ်များအောင်မြင်လိုပါက( ဗုဒ္ဓဟူး – စနေ – တင်္ဂနွေ နေ့များတွင်လုပ်ဆောင်ပါ)
* အင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်စေရန် ( စွယ်တော်သားကို နဂါးရုပ်ထု၍ ဆောင်ပါ။အရုပ်ကို သောကြ်ာနေ့မှာ ထုရပါမည်)
* အင်္ဂါသားသမီးများ ဘေးဘယာ ဝေး ကွာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ
ဆရာမိုးဇော်- ဝိမုဒ္ဓိ လက်ခဏာ+ ဗဒေ အာသဝေ
ဒီနေ့မှာအသက်(၃၉) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ပရိသတ်အချစ်တော် ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) (ခ) သုသု
ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့ဇွန်လ(၃၀) ရက်နေ့လေးကတော့ သုသုလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ရဲ့ အသက်(၃၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုသုကတော့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပျော်စရာဟာသ Tik Tok လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့သူပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်လာရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိလာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ “Happy birthday to me… (၃၉) နှစ်ထိ ကျွေးမွေးပေးကမ်းပြုစု ပေးခဲ့ကြသော မိဘ၊ဆွေမျိုး၊ဆရာသမား၊မိတ်ဆွေ ထမင်းရှင် (၇) ရက်သားသမီးများ တလုပ်စားဖူး ကျေးဇူးရှိသူများ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး စီးပွားတိုး လာဘ်ရွှင်ကျပါစေ ကြောင်းဆုမွန်ကောင်း ပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာမိတ်ဆွေအ ပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတချို့ကို ထမင်း၊ဟင်းနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ပါသေးတယ်။
စိတ်ထားကောင်းပြီးပရိသတ်တွေအ တွက်ပျော်စရာတွေပဲအမြဲမျှဝေပေးနေသူ သုသုကတော့အသက်(၃၉) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်းလူငယ်တစ်ယောက်လို အမြဲလန်းဆန်းတက်ကြွနေတာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့ကျရောက်တဲ့မွေး နေ့လေးကစပြီးဒီထက်မကပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုတွေနဲ့ ဘဝကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သုသုရေ
ဒီေန႕မွာ အသက္(၃၉) ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း) (ခ) သုသု
ပရိသတ္ႀကီးေရဒီေန႕ဇြန္လ(၃၀) ရက္ေန႕ေလးကေတာ့ သုသုလို႔ ပရိသတ္ေတြခ်စ္စနိုးနဲ႕ေခၚၾကတဲ့ မိတ္ကပ္ဖန္တီးရွင္ညီညီေမာင္(စမ္းေခ်ာင္း)ရဲ႕ အသက္(၃၉) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သုသုကေတာ့ မိတ္ကပ္ဖန္တီးရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ေပ်ာ္စရာဟာသ Tik Tok ေလးေတြနဲ႕ ပရိသတ္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အျပည့္အဝရရွိခဲ့သူပါ။
ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြပါ ရိုက္လာရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕က်ေရာက္တဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕ေလးမွာေတာ့ “Happy birthday to me… (၃၉) ႏွစ္ထိ ေကြၽးေမြးေပးကမ္းျပဳစု ေပးခဲ့ၾကေသာ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳး၊ဆရာသမား၊မိတ္ေဆြ ထမင္းရွင္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ား တလုပ္စားဖူး ေက်းဇူးရွိသူမ်ား အားလုံး စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာၿပီး စီးပြားတိုး လာဘ္႐ႊင္က်ပါေစ ေၾကာင္းဆုမြန္ေကာင္း ပို႔သအပ္ပါတယ္ရွင္” ဆိုၿပီး သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားမွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ဒီေန႕က်ေရာက္တဲ့သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕ေလးမွာမိတ္ေဆြအ ေပါင္းအသင္းသူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕ကို ထမင္း၊ဟင္းနဲ႕ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးခဲ့ပါေသးတယ္။
စိတ္ထားေကာင္းၿပီးပရိသတ္ေတြအ တြက္ေပ်ာ္စရာေတြပဲအၿမဲမွ်ေဝေပးေနသူ သုသုကေတာ့အသက္(၃၉) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္းလူငယ္တစ္ေယာက္လို အၿမဲလန္းဆန္းတက္ႂကြေနတာ အမွန္ပါပဲ ပရိသတ္ႀကီးေရဒီေန႕က်ေရာက္တဲ့ေမြး ေန႕ေလးကစၿပီးဒီထက္မကေပ်ာ္႐ႊင္ေအးခ်မ္းမႈေတြနဲ႕ ဘဝကိုအေကာင္းမြန္ဆုံးျဖတ္သန္းနိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ သုသုေရ
“ရေခဲသေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်” (ရေခဲသေတ္တာသုံးသူတိုင်း မဖြစ်မနေဖတ်ထားသင့်ပါတယ်)
၅။ ကာဘွန်နိတ်အအေးဗူး(ဥပမာ–ကိုကာကိုလာ၊ 100 Plus)စသည်တို့ကိုအပေါ်ထပ်အအေးခန်းထဲမထည့်ပါနှင့်။
၁၄။ အပူချိန်နိမ့်တွင်အလွယ်တကူပျက်စီးစေတတ်သောအသီးများ၊ဥပမာ–ငှက်ပျောသီး၊နာနတ်သီး၊ဖရဲသီး၊သခွားသီး၊ စသည်တို့ကိုရေခဲသေတ္တာအတွင်းထည့်သွင်းမသိုလှောင်ပါနှင့်။
အန္တရာယ်ကင်းရေး ပထမ (Safety First)
၄။ ရေခဲသေတ္တာတစ်ပတ်လည်လူဝင်လို့ရနိုင်လောက်သည်ထိ ခွာထားပါ။
၂။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်ဆိုသော်လည်းရေခဲသေတ္တာပေါ်သို့ ရေများလောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ဓါတ်လိုက်တတ်သည်။
၄။ တံခါးရွက်များတွင်လေလုံစေရန်ရာဘာပြားများတပ်ဆင်ထားပါသည်။ထိုရာဘာများကိုမပေါက်ပြဲစေရန်ဂရုစိုက်ပါ။ထိုရာဘာများပေါ်တွင်ချေးညှော်များကပ်နေခြင်းသည်ရာဘာ၏သက် တမ်းကိုကျစေသည်။
၈။ အကယ်၍ရေခဲသေတ္တာသည်Frost Freeမဟုတ်လျှင်အပေါ်ထပ်ရေခဲခန်း၌ရေခဲများကပ်တတ်သည်။
လွယ်ပါသည်။ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကိုvacuum cleaner ရှိပါက vacuum cleanerဖြင့်ဖုံ၊အမှုံများကိုစုပ်ထုတ်ပါ။ vacuum cleanerမရှိဘူးလား။လွယ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကိုအနည်းဆုံး၆လတစ်ကြိမ်၊ ၁ နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။သို့သော်ဖုံထူသောဒေသများတွင်နှစ်လတစ်ကြိမ်၊သုံးလတစ်ကြိမ်စသဖြင့်လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များအောက်တွင်ချွေးခံခွက်(drip tray)ရှိတတ်ပါသည်။ကွန်ဒင်ဆာမှကျလာသောချွေးများသည်ထိုခွက် အတွင်းတွင်စုနေမည်။ထိုခွက်ကိုလည်းမကြာခဏသွန်ပေးရန်လိုပါသည်။
၁။ မီးပြတ်သွားသော်လည်းမူလရှိသောအအေးဓါတ်ဖြင့်ရေခဲ သေတ္တာအတွင်းတွင်ဆက်လက်အေးနေမည်။
၃ ပတ်ထက်ကျော်ပြီးနေမည်ဆိုပါကရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိသမျှ အစားအသောက်အားလုံးကိုထုတ်ပါ။ရေခဲသေတ္တာကိုသန့်ရှင်းပါ။ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ထို့နောက်မီးပါပိတ်ပြီးပလပ်ကိုချွတ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ မီးပြတ်သွားပြီးမီးပြန်လာလျှင်ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ရန် (ရေခဲသေတ္တာလိုသည့်အပူချိန်ရောက်ရန်)၉နာရီမှ၁၄နာရီခန့် ကြာပါလိမ့်မည်။
၄။ Frost Freeသို့မဟုတ် Self-defrosting ဟုရေးထားသောရေခဲသေတ္တာများသည်အပေါ်ထပ်၌ခဲလာမည့်ရေခဲများကို ၆နာရီမှ၈နာရီကြာတိုင်းသူ့ဟာသူပြန်အရည်ဖျော်ပေးသွားပါလိမ့်မည်။
၅။ ယခုခေတ်ရေခဲသေတ္တာများ၌အနံ့ဖျောက်ပေးသည့် Platinum Deodorzing device ပါတတ်ပါသည်။သို့ သော်အပြင်ကကြည့်၍မမြင်ရပါ။
၆။ အကယ်၍မိုးသည်းထန်စွာရွာနေခဲ့သော်၊သို့မဟုတ်ရေခဲ သေတ္တာထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဝတ်ရေစိုများလှန်းထား သော်ရေခဲသေတ္တာနံရံ၌ချွေးပြန်တတ်ပါသည်။
၃။ ရေခဲသေတ္တာမီးလိုင်းက breaker ကျနေသလား။ Fuse (ဖျူ့စ်) ပြတ်နေသလား?
ဖျူ့စ်ကိုမူလအရွယ်ထက်ပိုကြီးမထားပါနဲ့။ရေခဲသေတ္တာပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ရေခဲသေတ္တာများအတွက်fuse ဟာ ၁၃ အမ်ပီယာ(13A)ဖျူ့စ်ဖြစ်ပါတယ်။)
၄။ ရေခဲသေတ္တာကဝိုင်ယာကြိုးကိုကြွက်တွေကိုက်ဖြတ်ထားလို့ ပြတ်နေသလား?
(ပုံမှန်ဆိုလျှင်ခလုတ်ကိုနံပါတ် ၃ မှာထားပါတယ်။နံပါတ် ၁ မှာဆိုအေးမှာမဟုတ်ပါ။နံပါတ် ၃ သို့ပြန်ပြောင်းပါ။)
၉။ တကယ်လို့Damper controlပါခဲ့ရင် mid-position (အလယ်မှာ)ထားပေးပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းကအပူချိန်ထိန်းခလုတ်ဟာနံပါတ် (၅) ကိုရောက်နေသလား?
တကယ်လို့ဖရဲသီးစိတ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းမထည့်ပါနဲ့။ wrapping plasticဆိုတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပတ်တဲ့ပလတ်စတစ်အကြည်စပါးပါးကလေးရှိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပတ်ပြီးမှထည့်ပါ။)
၃။ ချွေးခံခွက်(drip tray)ချောင်နေရင်လဲအသံထွက်တတ်ပါတယ်။ပြန်ကျပ်ပေးပါ။
ဇွန်လ (၃၀) ရက် ချဲဂဏန်းပေးပြန်ပြီ
ထိုင်းနိုင်ငံက ထူးဆန်းတဲ့ရွှေညောင်ပင်မှ တတိယအကြိမ် ချဲဂဏန်း (၃) လုံး ၊ (၂) လုံးကိုအထင်အရှားပေးသည်ဟုဆိုကာ လူအများလာရောက်ပူဇော်ပသကြပြန်ပြီ
ဇွန်လ (၃၀) ရက် အခုတလောထိုင်းမှာ အထူးအဆန်းဆိုရင်ချဲဂဏန်းတောင်းကြတဲ့ပို့စ်အတော်များများကိုမြင်တွေ့နေရတယ် ၊ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်း အူဒွန်ထာနီ ( Udonthani ) ခရိုင်ဖိန်မြို့ နယ် ( Phen ) ၊
ဘန့်ထတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊နားဖွန်ဆတ်ကျေးရွာအနီးအသက် ၉၄ နှစ်အရွယ် နိုင်ဒီးရဲ့လာ်ကွင်းစပ်မှာပေါက်နေတဲ့ သက် တမ်းနှစ် ၁၀၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ ညောင် ပင်အောက်မှနောက်ထပ်ညောင်ပင်ရဲ့အရွက်အားလုံးဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကတည်းက ရွှေရောင်လိုဝင်းပနေပြီး အရောင် ၄ မျိုးပြောင်းသည်ဟု အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် နန်းထန်ချနုတ် မှဆိုပါတယ် ။
ပထမမှာတော့ ပန်းရောင် ၊ နောက်တော့ဖက်ဖူးရောင် ၊အဲ့ဒီမှတဆင့်အဝါရောင် ၊ နောက်တော့အဖြူရောင်သို့ပြောင်းပြိး ယခုလိုဘဲရွက်ဟောင်းရွက်နုလဲသည်အထိပါဘဲ ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ညောင်ရွက်မှာ သင်္ချာဂဏန်းတွေထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ကြရတာမို့အနီအနားကဒေသခံ ၃၀၀ လောက်ဟာ သတင်းကြားပြီးညောင်ပင်ကိုလာရောက်ပူဇော်ကြပသကြပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကချဲဂဏန်း ၇၇၈ ၊ ၅၆၈ ကိုလည်း ဒီညောင်ပင်ကရခဲ့ကြတယ်လ်ု့ဆိုပါတယ်၊ယခုလည်း ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က ချဲဂဏန်းသုံးလုံးဂဏန်းဖြစ်တဲ့ 178 ၊ နှစ်လုံးဂဏန်း 59 ကိုမြင်တွေ့ကြသလို
တစ်ချို့လည်း 80 နဲ့ 29 ကိုမြင်တွေ့ကြတဲ့အတွက် သတင်းြ ထောက်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေခြေချင်းလိမ်နေကပါတယ် ၊ ဒေသခံတွေကတော့အမွှေးတိုင်တွေထွန်း ညှိပူဇော်ပသကြပါတယ် ။
ဒီရွှေညောင်ပင်ကနေပထမဆုံးနှစ်လုံးဂဏန်း 95 ကိုရခဲ့ပြီး ထီပေါက်ခဲ့တဲ့သူကတော့လယ်ပိုင်ရင်နိုင်ဒီးရဲ့သားမက်နဲ့သမီးတို့ဘဲဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ယခုလည်းဟုတ်မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရပါတော့မည် #မှတ်ချက် #ယုံကြည်သင့်မှယုံကြည်ပါ
Photo Credit #SiThuMaung
ေပါက္မေပါက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္နာ မည္ႀကီး‌ေနသည့္ေ႐ႊေညာင္ပင္က ေပးတဲ့ ခ်ဲဂဏန္း
ဇြန္လ (၃၀) ရက္ ခ်ဲဂဏန္းေပးျပန္ၿပီ…
ထိုင္းနိုင္ငံက ထူးဆန္းတဲ့ေ႐ႊေညာင္ပင္မွ တတိယအႀကိမ္ ခ်ဲဂဏန္း (၃) လုံး ၊ (၂) လုံးကိုအထင္အရွားေပးသည္ဟုဆိုကာ လူအမ်ားလာေရာက္ပူေဇာ္ပသၾကျပန္ၿပီ
ဇြန္လ (၃၀) ရက္ အခုတေလာထိုင္းမွာ အထူးအဆန္းဆိုရင္ခ်ဲဂဏန္းေတာင္းၾကတဲ့ပို႔စ္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ေနရတယ္ ၊ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလတုန္းကလည္း အူဒြန္ထာနီ ( Udonthani ) ခရိုင္ဖိန္ၿမိဳ႕ နယ္ ( Phen ) ၊
ဘန႔္ထတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၊နားဖြန္ဆတ္ေက်း႐ြာအနီးအသက္ ၉၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ နိုင္ဒီးရဲ႕လာ္ကြင္းစပ္မွာေပါက္ေနတဲ့ သက္ တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေညာင္ ပင္ေအာက္မွေနာက္ထပ္ေညာင္ပင္ရဲ႕အ႐ြက္အားလုံးဟာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လကတည္းက ေ႐ႊေရာင္လိုဝင္းပေနၿပီး အေရာင္ ၄ မ်ိဳးေျပာင္းသည္ဟု အသက္ ၄၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ နန္းထန္ခ်ႏုတ္ မွဆိုပါတယ္ ။
ပထမမွာေတာ့ ပန္းေရာင္ ၊ ေနာက္ေတာ့ဖက္ဖူးေရာင္ ၊အဲ့ဒီမွတဆင့္အဝါေရာင္ ၊ ေနာက္ေတာ့အျဖဴေရာင္သို႔ေျပာင္းၿပိး ယခုလိုဘဲ႐ြက္ေဟာင္း႐ြက္ႏုလဲသည္အထိပါဘဲ ။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေညာင္႐ြက္မွာ သခၤ်ာဂဏန္းေတြထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ၾကရတာမို႔အနီအနားကေဒသခံ ၃၀၀ ေလာက္ဟာ သတင္းၾကားၿပီးေညာင္ပင္ကိုလာေရာက္ပူေဇာ္ၾကပသၾကပါတယ္ ၊
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ေတြကခ်ဲဂဏန္း ၇၇၈ ၊ ၅၆၈ ကိုလည္း ဒီေညာင္ပင္ကရခဲ့ၾကတယ္လ္ု႔ဆိုပါတယ္၊ယခုလည္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕က ခ်ဲဂဏန္းသုံးလုံးဂဏန္းျဖစ္တဲ့ 178 ၊ ႏွစ္လုံးဂဏန္း 59 ကိုျမင္ေတြ႕ၾကသလို
တစ္ခ်ိဳ႕လည္း 80 နဲ႕ 29 ကိုျမင္ေတြ႕ၾကတဲ့အတြက္ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႕ေဒသခံျပည္သူေတြေျခခ်င္းလိမ္ေနၾကပါတယ္ ၊ ေဒသခံေတြကေတာ့အေမႊးတိုင္ေတြထြန္း ညွိပူေဇာ္ပသၾကပါတယ္ ။
ဒီေ႐ႊေညာင္ပင္ကေနပထမဆုံးႏွစ္လုံးဂဏန္း 95 ကိုရခဲ့ၿပီး ထီေပါက္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့လယ္ပိုင္ရင္နိုင္ဒီးရဲ႕သားမက္နဲ႕သမီးတို႔ဘဲျဖစ္ၾကပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္
ယခုလည္းဟုတ္မဟုတ္ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္ #မွတ္ခ်က္ #ယုံၾကည္သင့္မွယုံၾကည္ပါ